Vipassana Meditation teaching wma audio in english by Saddhmmaramsi Sayadaw Ashin Kundala Bhivamasa <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
ဇေယျာခေမလမ်း၊ ရှစ်မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊
ကျေးဇူးတော်ရှင် ၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလာဘိဝံသ အရှင်သူမြတ် (သက်တော် (၉၁) နှစ်သက်တော် (၉၁) နှစ်) သည် (၁၆-၁၂-၂၀၁၁) နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် (၇:၃၅) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာကြီး ၌ ခန္ဓာဝန်ချတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း
၁။ ဘွဲ့တော် - ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလာဘိဝံသ (အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ)
၂။ ကျောင်းတိုက် - သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ၊ အမှတ် (၇)၊ ဇေယျာခေမာလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။
၃။ အသက်၊ သိက္ခာ၊ ဂိုဏ်း - သက်တော် (၉၁)၊ သိက္ခာတော် (၇၂) ဝါ၊ ရွှေကျင်ဂိုဏ်း။
၄။ မွေးသက္ကရာဇ် - (၁၂၈၃) ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၁) ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
၅။ ဇာတိရပ်ရွာနှင့် ခမည်းတော် မယ်တော်တို့၏အမည် - ပဲခူးတိုင်း၊ ဝေါမြို့နယ်၊ ဝင်းကဒတ်ရွာ၊ ဦးသာဖြိုး+ဒေါ်ပုတို။
၆။ ရှင်သာမဏေပြုခြင်း - (၁၂၉၃) ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း (၁၂) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောင်းတော်ရာကျောင်းတိုက် နမူနာစံကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တခေမာကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြ၍ ရှင်သာမဏေအဖြစ်သို့ရောက်သည်။
၇။ ရဟန်းပြုခြင်း - (၁၃၀၂) ခုနှစ်၊ တပွဲတွဲလဆန်း (၁၂) ရက်နေ့တွင် ဖိုးစမ္ပါရွာ၊ ကန်ကြီးကျောင်းဆရာတော် ဘန္ဒန္တဓမ္မပိယကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရဟန်းအဖြစ်သို့ရောက်သည်။
၈။ စာပေသင်ယူခြင်း - ညောင်လေးပင်တောရကျောင်းတိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့ကျောက်ကုန်း မေဒိနီကျောင်းတိုက်၊ ညောင်တုန်းမြို့ ရွှေဟင်္သာတောရကျောင်းတိုက်တို့၌ ပရိယတ္တိစာပေများကို သင်ယူခဲ့ပါသည်။
၉။ အောင်မြင်ခဲ့သော စာမေးပွဲများ - သာသနဓဇသိရီပဝရ ဓမ္မစရိယ၊ စေတိယင်္ဂဏဓမ္မစရိယတို့ကို အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
၁၀။ ခံယူခဲ့သော ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ - မြန်မာနိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ ဆက်ကပ်သော မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယနှင့် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ခံယူရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၁။ စာပေပို့ချခြင်း - ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်ကုန်းတောရ မေဒိနီကျောင်းတိုက်၌ တပည့်များအား ပိဋကတ်ကျမ်းစာများကို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ၌ တပည့်များအား ပိပဿနာရှုမှတ်ပုံ၊ နည်းနိဿယည်းများကို ပို့ချသင်ကြား ပြသခဲ့ပါသည်။
၁၂။ သာသနာရေးတာဝန် ဆောင်ရွက်ချက်များ - ပြည်ပသာသနာအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ (၁၉၉၄) ခုနှစ်မှစ၍ (၂၀၀၂) ခုနှစ်အထိ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံ၊ အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများ၌ တရားဟော၊ တရားပြ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၁၃၄၀) ပြည့်နှစ်မှစ၍ မဟာစည်ရိပ်သာ နာယက ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ၌ ဝိပဿနာတရား ဟောကြားပြသခြင်းစသော သာသနာ့တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၃။ ရေးသားပြုစုသောကျမ်းဂန်များ - ဒုက္ခကင်းဝေး ပေါင်းသင်းရေး၊ မင်းဆင်ပမာ ကျင့်ဖွယ်ရာ၊ ယခုဘ၀ ကောင်းမြတ်လှ၊ ဒုလ္လဘသိဖွယ် ဝိနည်းငယ်၊ သိကောင်းစရာ ဓမ္မပဒေသာ (ပထမတွဲမှစ၍ ဧကာဒသမတွဲ) ဣန္ဒြေစွမ်းအင် ထက်မြက်ကြောင်း (၉)ပါး တရားတော်၊ ပဋ္ဌာန်းနှင့် ဝိပဿနာစသော ကျမ်းစာအုပ်ငယ်များကို ရေးသားခဲ့ပါသည်။
၁၄။ ရဟန်းရှင်၊ လူတို့၏ ကြည်ညိုလေးစားမှု - ကမ္မဋ္ဌာန နယဒေသကဂုဏ်၊ ဝိပဿနာဓုရာဝဟဂုဏ်၊ သီလ သမာဓိ ပညာဂုဏ်၊ နာယကဂုဏ် စသည်တို့နှင့် ပြည့်စုံသောကြောင့် ရဟန်းရှင်လူ အများပြည်သူတို့၏ ကြည်ညိုလေးစားမှုကို ခံယူရရှိတော်မူပါသည်။
Dahma teaching on7days Vipassana Retret
held from 29-12-2002 to 5-1-2003 at
(Translated by U Tin Oo Hlaing)
1. 30-12-2002 8pm
The advice of Venerable Kaccayana
2. 31-12-2002 8pm
Three kinds of Essence
3. 1-1-2003 8pm
4. 2-1-2003 8pm
5. 3-1-2003 8pm
Four Characteristic Qualities ofaStream Winner
6. 4-1-2003 8pm
Discource on Supporting the Vipassana right view of knowledge